अहिलेका चर्चित तथा सुन्दरी वलिउड नायिका कियारा अड्वाणीको डेटिङ्ग सिद्धार्थ मलहोत्रासँग !!! – News Nepali Dainik
अहिलेका चर्चित तथा सुन्दरी वलिउड नायिका कियारा अड्वाणीको डेटिङ्ग सिद्धार्थ मलहोत्रासँग !!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: १५:५१:४४
वलिउडमा अहिले यि दुुई नाम धेरै चर्चामा आईरहेको छ । कियार अड्वाणी र सिद्धार्थ मलहोत्रा नाम एक साथ लिने गरिएको छ । भनिन्छ यि दुई वलिउड एक्टेस विच त केही चलिरहेकै छ । दुवै एकसाथ लन्चमा भेटिनु, धेरै इभेन्टस्मा सँगै पुग्नुले सवैको आँखाको निशाना हुनु त स्वभाविकै हो ।
अहिले आएर एक इन्टरभ्यूमा कियाराले यस्तो कुरा भनेकी छिन् कि जुन सुनेर तपाई सजिलै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ उनि अहिले कसैसँग डटिङ्ग गरिरहेकी छिन् ।
मिडिया रिपोर्टस्लाई मान्ने हो भने हालै फिल्मफेयरलाई दिएको एक इन्टरभ्यूमा उनलाई सोधेको प्रश्नको जवाफवाट एकाएक अभिनेत्री कियारा चर्चामा आईन् । कियाराको जवाफ थियो कि उनि यहि साल डेटमा गएकी थिईन् । कियाराको यो जवाफवाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनि सिद्धार्थ मलहोत्रासँग डेटिङ्गमा छिन् ।
वर्षको सुरुवातमा कियारा र सिद्धार्थ एक साथ लन्चमा भेटिएको थियो । त्यही वेला देखि दुवैको अफेयरको चर्चा चलिरहेको छ । यस पछि दुवै एक साथ करण जौहरको पार्टिमा पनि आए र राती एउटै गाडीमा स्पट गरियो ।
उनि त्यस वेला हैरान भईन की जव सिद्धार्थको घरको वाहिर उनलाई स्पट गरिएको थियो । हुनत अहिले सम्म मिडियालाई दुवैले खुलेर केहि वताएको त छैन । तर इन्टरभ्यू पछि भने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनिहरु रिलेशनशिपमा छन् । साँचो कुरा के हो कियारा र सिद्धार्थ नै जानुन ।
Last Updated on: March 20th, 2021 at 3:51 pm